टिकटक’मा हिट सम्झना पहिलो पटक मिडिया ! : भन्छिन्,- “पल शाहसंग खेल्ने तयारीमा छु” हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)::Point Nepal
टिकटक’मा हिट सम्झना पहिलो पटक मिडिया ! : भन्छिन्,- “पल शाहसंग खेल्ने तयारीमा छु” हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
सामाजिक संजालको बढ्दो प्रयोगसंगै धेरै मानिसहरु रातारात हिट भएका छन् । बिशेषगरी पछिल्लो समय टिकटकले धेरैलाई सेलिब्रेटी बनाएको छ । टिकटकमा हाल्ने भिडियोकै कारण आम नेपालीमाझ उनीहरु सेलिब्रेटी झै लोकप्रिय बनेका छन् ।
कोही अभिनयका कारण त् कोही सम्बादकै कारण टिकटकमा रातारात हिट भएका छन् । सफलता यतिसम्म पुगेको छ कि केहीले म्युजिक भिडियोमा समेत अभिनय गर्ने अवसर प्राप्त गरी रकेका छन् । यदि तपाई टिकटक हेर्नु हुन्छ भने सम्झनाको आवाज पक्कै पनि सुन्नु भएकै होला थप भिडियोमा हेर्नुस्…..